Jamaahiirta Real Madrid oo u codeeyay xidiga ay doonayaan inuu ciyaaro kulanka Espanyol, xidigaha Benzema iyo Díaz – Gool FM
Jamaahiirta Real Madrid oo u codeeyay xidiga ay doonayaan inuu ciyaaro kulanka Espanyol, xidigaha Benzema iyo Díaz
(Real Madrid) 20 Sab 2018. Taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa ka codsaday tababare Julen Lopetegui inuu ciyaarsiiyo Mariano Díaz, halka uu ka ciyaari lahaa Karim Benzema, kulanka Sabtida soo aadan ay Espanyol ay kula ciyaari doonaan horyaalka La Liga.
Karim Benzema ayaa xilli ciyaareedkan si wacan ku bilowday, taasoo ka dhigtay inuu hogaanka u qabto gooldhalinta horyaalka La Liga, laakiin wuxuu ku fashilmay inuu shabaqa gaaro labadii kulan ugu dambeeyay ee Athletic Bilbao iyo Roma.
Dhinaca kale Mariano Díaz ayaa kasoo muuqday qorshaha Julen Lopetegui kulankii AS Roma ee Champions League, tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay kooxda suuqii dhawaa ee xagaaga.
Mariano Díaz ayaa kulankii Roma ku yimid qaab badal ah, balse wuxuu isla kulankan xaday quluubta jamaahiirta, kadib markii uu dhaliyay gool aad u qurux badan.
Hadaba wargeyska AS ayaa sameeyay baaris ku saabsan magaca weeraryahanka jamaahiirta Real Madrid ay doonayaan inuu ciyaaro kulanka Espanyol Benzema ama Díaz.
Codadkii ay jamaahiirta Real Madrid ka dhibteen baaristaan ayuu Mariano Díaz ka helay 77%, halka 33 kaliya ay u codeeyeen Karim Benzema si uu ugu soo bilaawdo kulanka soo aadan ee Espanyol.
Messi oo go'aansaday inuu ka soo qeyb galo xafladdda FIFA iyadoo ay jirto inuusan ku jirin 3-da u Sharaxan Abaal marinta...(Maxay tahay SABABTA?)